Afghanistan: hawenay sarkaalad ah oo la dilay iyo dibadbaxyo rabshado wata | Berberanews.com
Home WARARKA Afghanistan: hawenay sarkaalad ah oo la dilay iyo dibadbaxyo rabshado wata
Afghanistan: hawenay sarkaalad ah oo la dilay iyo dibadbaxyo rabshado wata
Daalibaan waxay xidheen afar nin oo isku dhaceen dibadbaxayaasha oo saxafiyiin ku qabtay qoryo si ay u jebiyaan mudaaharaadkii xuquuqda haweenka ee Kabul Sabtidii, sidaa waxa yidhi afhayeenka Zabihullah Mujahid.
Mudaaharaadku wuxuu yimid iyada oo dagaal ba’an uu ka socdo dooxada Panjshir, oo ah meesha ugu dambaysa ee ay haystaan ​​xoogagga ka soo horjeeda Daalibaan ee dawladdii dhacday, iyo iyadoo Afghanistan ay sugayso taliyayaasha cusub ee dalka si ay u muujiyaan sida ay u qorshaynayaan inay wax u maamulaan.
Haweeney ka tirsaneyd booliiska ayaa lagu toogtay gurigeeda oo ku yaalla badhtamaha gobolka Ghor, iyadoo dil qorsheysan lala beegsaday eheladeeda horteeda, waxayna ehelku eedeeyeen Taliban, BBC -da ayaa werisay.
Waa tii ugu dambaysay ee ku saabsan xisaabaadyo badan oo muujinaya dilal aargoosi ah oo dalka oo dhan ka dhacay, in kasta oo Taliban ay ballanqaaday inaanay aargoosan doonin cadawgii hore.
Dadaallada Talibanka si ay u daadiyaan sawirkooda taariikhiga ah ee arxan -darrada iyo dulmiga, oo durba si xun u wiiqay amar ah in dhammaan haweenka marka laga reebo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ay guryahooda ka joogaan, ayaa waxaa sii carqaladeeyay gacan -ka -hadalkii rabshadaha watay ee Sabtidii.
Previous articleMidowga Yurub oo safiir cusub u magacaabay Somalia
Next articleBerbera: waa sidee xaaladda biyaha magaaladu?